Ny fitsarana farany - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-04 > Ny Fitsarana Farany
Ho afaka hijoro eo anatrehan’Andriamanitra ve ianao amin’ny andro fitsarana? Izany no fitsarana ny velona sy ny maty rehetra ary mifandray akaiky amin’ny fitsanganana amin’ny maty. Misy Kristianina matahotra an’io fisehoan-javatra io. Misy antony tokony hatahorantsika an’izany, satria samy manota isika: “Samy mpanota avokoa izy rehetra ka tsy manana voninahitra tokony hananany eo anatrehan’Andriamanitra” (Romana . 3,23).
Impiry ianao no manota? indraindray? Isan'andro? Ny olombelona dia tena mpanota ary ny ota dia mitondra fahafatesana. “Fa izay rehetra alaim-panahy kosa dia sosotra sy voafandriky ny faniriany. Ary rehefa izany, rehefa torontoronina ny filana, dia miteraka ota; fa ny ota, rehefa tanteraka, dia miteraka fahafatesana » (Jakoba 1,15).
Dia afaka mijoro eo anatrehan’Andriamanitra ve ianao ka milaza Aminy ny zava-tsoa rehetra nataonao teo amin’ny fiainanao? Ohatrinona ny maha-zava-dehibe anao teo amin'ny fiaraha-monina, nanao ahoana ny asan'ny fiarahamonina? Tena mahafeno fepetra ve ianao? Tsia - tsy misy na iray aza amin'izany hanome anao fahafahana miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria mbola mpanota ianao ary Andriamanitra dia tsy afaka miaina miaraka amin'ny ota. “Aza matahotra, ry ondry vitsy! Fa sitraky ny rainao ny hanome anao ny fanjakana” (Lioka 12,32). Andriamanitra irery ihany ao amin’i Kristy no namaha io olan’ny olombelona rehetra io. Nentin’i Jesosy ho eo aminy ny otantsika rehetra rehefa maty ho antsika Izy. Amin’ny maha Andriamanitra sy olombelona Azy, ny sorona nataony ihany no afaka manarona sy manafoana ny fahotan’ny olombelona rehetra – mandrakizay sy ho an’ny olona rehetra izay manaiky Azy ho Mpamonjy.
Amin'ny andro fitsarana, hitsangana eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina ao amin'i Kristy ianao. Noho izany antony izany ary noho izany antony izany, Andriamanitra Andriamanitrao dia hanome anao amim-pifaliana sy ny olona rehetra izay ao amin'i Kristy ny fanjakany mandrakizay amin'ny fiarahana mandrakizay amin'ilay Andriamanitra telo.
nataon'i Clifford Marsh